London School of Economics Iinkcukacha
Owadala : 1895
Musa ukulibala ukuba ukuxoxa London School of Economics
Babhalise kwi London School of Economics
LSE Liziko ephambili inzululwazi yoluntu kwihlabathi, kunye ezininzi ingcali ehlabathini kwiinkalo zabo nzulu olukwinkqanaba.
ISikolo inikezela izifundo hayi kuphela economics and science yezopolitiko, kodwa kuluhlu olubanzi izifundo zenzululwazi zentlalo, wafundisa ngaphakathi 19 amasebe kunye nenani namaziko ahlukeneyo.
(BSc / BA / LLB) – kweenkqubo zonyaka-emithathu okanye iminyaka emine yokuqala-isidanga kuluhlu olubanzi izifundo, kokunikela uqeqesho oluluncedo wechiza iindlela ezahlukeneyo zemibuzo zentlalo.
wafundisa: (Diploma / MSc / MA / MPA / LLM) - Iinkqubo oneminyaka emibini-omnye okanye. lwemenu abaninzi amava kunye uhlalutyo olungqongqo zemfundo ukwenzela ukwandisa ulwazi lwabasebenzi kwiinkalo ezithile.
uphando: (MPhil / MrEs / PhD) – nkqubo ukuvelisa iinzululwazi asekuhlaleni, wayezazi kakuhle kuluhlu ubuchule zenzululwazi yezentlalo kunye neendlela, ulwazi olunzulu kwindawo ethile.
University of Iinkqubo International London:
(BSc Iinkqubo / Diploma) – study ngokusebenzisa ukufunda, ngoncedo izikhokelo zezifundo nezinye izibonelelo ezibonelelwa LSE.
Abafundi abavela kulo lonke ihlabathi amamkele kwi LSE ukususela ekusekweni School 1895. Okwangoku kukho phezu 150 amazwe zimelwe ekhampasini, ukwenza LSE eyunivesithi ngokukhethekileyo ngamazwe kwaye umtsalane. LSE kukunika ithuba lokuba bafunde iisayensi zentlalo ngokwembono yabaluleka, singqongwe uluntu lwamazwe ngokupheleleyo.
Njengoko umfundi zidanga ngamazwe, uya kwaqinisekiswa yokuhlala e nokuba LSE okanye University of London Hall of Residence, ukuba nje isicelo umhla wokugqibela 31 UCanzibe. Ngelishwa asinako ngqiniseko indawo umfundi ngamnye onesidanga, nangona iindawo ziyafumaneka kwiiholo LSE kunye namaholo intercollegiate.
Kukho inani iindlela apho unako ukufumana ngaphandle okuninzi malunga LSE. Nyaka ngamnye, masilubambe Iintsuku ezimbini isidanga Open. in 2016 aba uya kubanjwa ngo-Apreli nangoJulayi.
Kungenjalo, unokuba ujoyine ukhenketho kwikhampasi, okanye iqhube ukhenketho yakho okhokelwa isiqu, nabasebenzi ngaphezu kukuvuyela ukuphendula nayiphi na imibuzo onayo – uyeke nje Student Marketing nokugaya (6th Floor, Tower One).
Ukuba awukwazi kwenza kuthi buqu, onokulujonga Study ethu LSE iividiyo, ufunde esinye bloggers zethu umfundi, imeyila alum okanye ukuhlangabezana enye abameli bethu xa betyelele zengingqi yakho.
Department of Accounting ISebe of Media noNxibelelwano
Department of uLungiselelo Department of Indlela
Isebe of History Economic Department of Philosophy, Logic kunye Indlela Scientific
Department of Economics ISebe of Psychological and Science bokuziphatha
ISebe lezeMali Department of Social Policy
ISebe of Geography ne Environment Department of Sociology
ISebe loPhuhliso International European Institute
ISebe of History International Gender Institute
ISebe of Relations International International ukungalingani Institute
Department of Law Institute of Affairs Public
Department of Management Center Language
Department of Mathematics Marshall Institute for Ukuliza and Entrepreneurship Social
I-London School of Economics yasekwa ngo 1895 yi Beatrice ne Sidney Webb, ekuqaleni ngemali yi ni ndzhaka kwe £ 20,000 kwilifa ka Henry Hunt hutchinson. hutchinson, igqwetha kunye nelungu noFabian Society, washiya imali trust, ukuba abeke “ngakwicala lokukhuthaza izinto zayo nayiphi na indlela abazithatha ezinconywayo”. Abaphathiswa abahlanu Sidney Webb, Edward Pease, Constance hutchinson, William de Mattos noWilliam Clark.
LSE ithi isindululo ukuseka isikolo wakhawulwa kwintlanganiso sakusasa nge 4 EyeThupha 1894, phakathi Webbs,UGraham Wallas noGeorge Bernard Shaw. Isindululo yamkelwa trustees ngoFebruwari 1895 kunye LSE yabamba kwiiklasi yayo yokuqala ngo-Oktobha waloo nyaka, kumagumbi e 9 John Street, Adelphi, e City of Westminster.
I-School wajoyina federal University of London ngo 1900, waba zeyunivesithi Faculty of Economics, kunikwa izidanga ze-University ukusuka 1902. Ukwandisa ngokukhawuleza kule minyaka ilandelayo, isikolo waya ekuqaleni ukuya ezikufuphi 10 Adelphi Terrace, emva koko Clare Market and Houghton Street. Ilitye lesiseko le Building Old, ku Houghton Street, esabekwa King George V ngo 1920; isakhiwo kwavulwa 1922.
Le mpikiswano kwezoqoqosho 1930 phakathi LSE kunye Cambridge waziwa kakuhle abafundile. Ungquzulwano phakathi uluvo kwizifundo LSE kunye Cambridge lusukela iingcambu yesikolo xa LSE ka-Edwin Cannan (1861-1935), UProfesa Economics, kunye Cambridge kaThixo Professor of Economy Political, Alfred Marshall (1842-1924), Economist phambili kosuku, babephikisana ngalo mbandela lisisiseko ezoqoqosho kunye nokuba ngaba isifundo kufuneka ingathatyathwa organic yonke. (Marshall walahla zokubonisa LSE kaThixo eyahlukileyo theory ecocekileyo kunye ukuzingisa layo kwimbali kwezoqoqosho.)
Kwakhona imbambano ochaphazelekayo umbuzo kwendima ngezoqoqosho ngayo, nokuba oku kufuneka abe ingcali yaxobuka okanye umcebisi practical. LSE and Cambridge amagqwetha kunye noqoqosho basebenza kunye ngo-1920-umzekelo, i London neNkonzo-kodwa Economic yaseCambridge-1930 bazisa ukubuyela sempikiswano njengoko LSE kunye Cambridge babebanga isicombululo kwezomnotho.
LSE kaThixo Lionel Robbins and Friedrich Hayek, kunye Cambridge Yohane Maynard Keynes baba amanani abaziintloko kwi ingxabano ngokwasengqondweni phakathi kwamaziko. Imbambano inabe ukusuka deflation kuthelekiswa nolawulo lwemfuno njengesisombululo iingxaki zoqoqosho suku, ukuba imibono ngokubanzi ezoqoqosho kunye Uqoqosho. Robbins and Hayek kaThixo izimvo lwasekelwa kwi-Austria School of Economics kunye nokugxininisa kwayo lorhwebo olukhululekileyo olukhoyo ne anti-interventionism, ngexesha Keynes phambili uhlobo ithiyori lwezoqoqosho ngoku eyaziwa ngokuba Keynesianism ekhuthaza iimpendulo-nkqubo esebenzayo licandelo likarhulumente.
Ebudeni beMfazwe Yehlabathi II, i-School decamped ukusuka eLondon ukuya kwiYunivesithi yaseCambridge, uhlala izakhiwo engeka Peterhouse.
iingalo yesikolo, kuquka isaci kunye beaver yalo iyona, zamkelwa ngo February 1922, kwisindululo ikomiti elinambini, kubandakanya abafundi ezisibhozo, eyasekwa ukuba ndiphande ngalo mba. I Isaci Latin, “Ukuze ukwazi unobangela”, iyathathwa Georgics Virgil ngayo. translation Its IsiNgesi yi “Ukwazi Unobangela Izinto”kwaye kwacetyiswa nguNjingalwazi Edwin Cannan. Le mascot beaver eyakhethwayo wemibutho yayo “wokuyenza, constructiveness nokuziphatha ikhuthele”.
Ethetha ngo 2001 kwimo ekuphumeni LSE, iphephancwadi British The Economist lathi “engamashumi amabini edlulileyo LSE kwakusekho ulwalamano abaziintsizana University of ezinye iikholeji eLondon. ngoku… njalo kulandela Oxford kunye Cambridge amacwecwe league kwemveliso zophando kunye nomgangatho wokufundisa kwaye ubuncinane ngokunjalo-balibhengeza ngokuba Oxbridge”. Ngokutsho kweli phephancwadi, isikolo “impumelelo yayo ukuya 'ingqalelo, American-style ukuxhatshazwa igama layo lophawu kunye uxhulumaniso ezopolitiko ngabalawuli kutshanje, ingakumbi uMnu Giddensand eyandulela wakhe, John Ashworth”, kwaye uphakamisa imali evela kubafundi wesinye’ iirhafu eziphezulu, ezo ezitsalwa iinkwenkwezi zemfundo ezifana asRichard Sennett.
kutshanje, School ebezimisele ekuchaseni kwizindululo zikarhulumente waseBritani ukwazisa amakhadi ID enyanzelekileyo, ukuphanda kungena iindleko ezinxulumene kwenkqubo, yaye kude imbono yoluntu kunye norhulumente malunga nomba. Eli ziko kwakhona ludumile abezopolitiko kunye ePalamente ukuze uqalise inkqubo entsha, imithetho manifesto izibambiso, nywa kunye bekusungulwa Enesisa Democrats Manifesto Conference phantsi Nick clegg ku 12 EyoMqungu 2008.
In the 2010s okuqala, buchopho alo aye phambili zombini uthethwano karhulumente kazwelonke kunye ngamazwe, nokubuyekezwa nkqubo, kubandakanya abamele kwi UK Commission Airports, Commission Police Independent, IKomiti yeeNgcebiso Ukufudukela kwenye, IBhodi eCebisayo UN kwi Water and Sanitation,Commission Finance London, HS2 Limited, Commission Infrastructure urhulumente UK kunye nokucebisa kwi-Architecture ne Urbanism ukuba London 2012 Olimpiki
Kuye kudidi neeyunivesithi zehlabathi ezine ezizezona phezulu ngokungqinelana kubaqeshi kule minyaka mihlanu idlulileyo. Uninzi lwabafundi LSE bazibandakanya kwingqesho okanye aqhubele phambili ngokufunda kwisithuba seenyanga ezintandathu iziqu, i-School kuqala kuluhlu ukuze ube nokuqesheka kwi 2012 ISunday Times Good University Guide. Amacandelo oluqhelekilyo abaphumelele LSE ukusebenza zingaphelanga iinyanga ezintandathu isidanga ukuba kweebhanki, ezezimali mali; uphuhliso, NGOs kunye nemibutho yamazwe ngamazwe; lokucebisa; imfundo; kunye norhulumente kazwelonke kunye wengingqi. Ukwengeza, i-avareji yomvuzo izidanga abagqibe zombini zesidanga kunye graduate degree kunye LSE iphezulu kakhulu ngaphezu umvuzo uwonke kazwelonke avareji nge £ 28.100 (undergraduates) kanye £ 35.400 (izidanga).
Craig calhoun Nathwala isithuba soMlawuli ngoSeptemba 2012. UMlawuli wayo wangaphambili, Judith Rees, kwakhona sihlalo Grantham Institute yesikolo kuTshintsho lweMozulu, umcebisi ukuba iBhanki yeHlabathi kunye nokuhlala kwiBhodi Advisory uSosiba Jikelele yezamanzi nogutyulo kunye neBhunga International Advisory Scientific (ISAC). Uphinde owayesakuba umququzeleli yeSebe Geography ne Environment, bakhonza njengeSekela Mlawuli ukususela 1998-2004.
in 2013, i Grimshaw International Relations Society, omnye wemibutho midala kunayo umfundi kwi campus, Wabanjwa a furore phezu BBC Panoramadocumentary ku North Korea, yathathwa ngaphakathi esilwela ingcinezelo, nto leyo eye ofisi enemvume ngamagosa DPRK ekwinqanaba eliphezulu. I 'uhambo edutainment’ kwabangela ingqalelo amajelo endaba ezizwe ngezizwe, njengoko intatheli BBC ukuba ukuzenza unjingalwazi evela LSE covertly.There yaba ngxoxo njengoko apho oku ubomi yomfundi engozini nolawulo ingcinezelo ukuba yintatheli sele obala. Urhulumente North Korea wenza izisongelo ezinobutshaba malunga abafundi LSE, emva kokuba abantu, nto leyo eyanyanzelisa uxolo evela BBC.
Uyafuna ukuxoxa London School of Economics ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
London School of Economics kwi Map
iifoto: London School of Economics ezisemthethweni kwiFacebook
London School of reviews Economics
Dibanisa ukuxoxa of London School of Economics.